Ukucaciswa kokugqibela kwe-OnePlus 6T | I-Androidsis
Ngo-Okthobha i-29, inkampani ye-OnePlus iya kuzisa isizukulwana esitsha soluhlu kuphela olukhoyo ngoku kwintengiso. Ifemi inyanzelwe qhubela phambili intetho ngolunye usuku ukuze ingangqinelani nomsitho u-Apple awucwangcisileyo ngo-Okthobha u-30, nangona inkampani esekwe eCupertino ingazukuveza nayiphi na i-iPhone.
Kodwa ngelixa umhla wentetho ufika, ukuvuza kwesiphelo esitsha kuyaqhubeka ukufikelela kwi-Intanethi. Eyokugqibela ifumaneka kwiinkcukacha ezipheleleyo, uninzi lwazo lwalucingelwa kodwa ukwazi i-OnePlus sasingenalo ukhuseleko olupheleleyo. Apha sikubonisa ifayile ye- Ukucaciswa kunye neempawu ze-OnePlus 6T.
Ukucaciswa kwe-OnePlus 6T
Isikrini 6.4 intshi nge-2.340 × 1.080 isisombululo AMOLED
Umlinganiselo wesikrini 19.5: 9
Inguqulelo ye-Android Ipie ye-Android 9
Ukugcina I-128 GB ngaphandle kokuyandisa nge-MicroSD
Iikhamera zangasemva 16 + 20 mpx zombini kunye nokuvula f / 1.7
Ikhamera yangaphambili 20 mpx ngokuvula f / 1.7
Ubukhulu 157.5 × 74.9 × 8.2 mm
Ibhetri I-3.700 mAh ngenkxaso ekhawulezileyo yokuhlawula
Njengoko sibona kwimifanekiso ekhutshiweyo, ubungakanani benotshi buncitshiswe kakhulu, isibonisa uyilo olufana ncam nolo luboniswe yiFowuni ebalulekileyo ye-PH1, i-smartphone yokuqala kwintengiso yokufaka inotshi phezulu kwesikrini.
Enye yezinto ezintsha ezinqabileyo, siyifumana kwisisombululo sekhamera yangaphambili, efikelela kuma-20 mpx, kwi-16 mpx yemodeli yangaphambili. Ubungakanani besikrini buye bahluka nge ukusuka kwii-intshi ezingama-6,28 ze-OnePlus 6 ukuya kwi-6,4 yemodeli entsha. Iprosesa, njenge chip yemizobo, iyafana, nangona kunjalo, amandla ebhetri asuka kwi-3.300 mAh ye-OnePlus 6 ukuya kwi-3.700 mAh yesizukulwana esitsha.
Olona tshintsho luyilo loyilo lubonelelwa sisizukulwana esitsha se-OnePlus sifumaneka kwifayile ye- Ukunyamalala kwe-headphone ye-3,5mm, Isigqibo ekunokwenzeka ukuba asihlekisi kubalandeli benkampani, abathi kuvavanyo ngaphambi kokuphehlelelwa kwe-OnePlus 6 bathi bafuna ukuqhubeka nokonwabela olu nxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu zokugqibela ze-OnePlus 6T